घरमै आइसोलेसनमा बस्दा सास फेर्न गाह्रो भयो भने के गर्ने ? हेर्नुहोस् यी ९ उपाय – चितवन मिडिया
काठमाडाैं । नेपालमा अहिले कोरोनोको दोस्रो लहरको चलिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको छ ।पहिलो लहरको महामारीमा भन्दा अहिले कोरोना ७० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन कमि हुनु निकै ठुलो समस्या हो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले स्वाँसप्रस्वास निकै समस्या आइरहेको बताइएको छ।
कोरोना संक्रमित हुनेहरुको अक्सिजन लेभल घटेर ज्यानसमेत गइरहेको छ। स्वाँसप्रस्वासमा समस्या आइहाले तत्काल के गर्न सकिन्छ ? विज्ञहरुले सुझाएका उपायबारे चर्चा गरेका छाैँ ।– विज्ञका अनुसार स्वाँस प्रस्वासमा समस्या आए ग्याँस सिलिन्डर, ग्यास स्टोभ, मैनबत्ति, ग्यास हिटरभन्दा कम्तिमा ६ फिट टाढै बसौं ।
– पेन्ट थिनर, एरयोसोल, क्लिनिङ फ्लुजस्ता फ्लेमेबल प्रोडक्टहरु प्रयोग नगरौं। त्यस्तै पेट्रोलियम, आयल, ग्रीस बेस्ड क्रिम वा भ्यासलिनजस्ता क्रिमहरुको पनि प्रयोग नगरौं।-धुम्रपान नगरौं। धुम्रपान गर्नेहरुबाट पनि टाढौं बसौं। त्यस्तै घरमा प्रयोग हुने विभिन्न केमिकल वा अगरबत्तिको धुँवाबाट पनि टाढै बसौं।
– यस्तो बेला शरी`रलाई डहाइड्रेड हुन नदिनुस्। पर्याप्त पानी खानुहोस्। पानीको वैज्ञानि सुत्र एच टु ओ हो, ओ को मतलब अक्सिजन हो। यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने काम गर्छ
– दैनिकरुपमा मेडिटेशन गर्नुहोस्। केही समयसम्म लामो साँस लिने र फाल्ने गर्नुहोस्। यस्तो अभ्यासले शरीरलाई राम्रो गर्छ।
– अक्सिज`नयुक्त खाद्य पदार्थहरु खानु`होस्। हरियो साग`पात, फलफूल, ब्रोकाउली, अजवाइनजस्ता चिजहरु खानुहोस्।
– खानामा सोडियम डाइटको सेवन गर्नुस्। यसले किड्नी र रगतमा जाने अक्सिजनको मात्रा बढाउने काम गर्छ।धेरै नै सम`स्या भएको खण्डमा तुरून्त डाक्टरको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण: कोभिड उपचारमा ‘गन्ध प्रशिक्षण’ को सुझाव कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर घ्राणशक्ति अर्थात् सुँघ्ने क्षमता गुमाएका मानिसहरूलाई स्टेरोइड औषधि प्रयोग गर्नुको साटो ‘गन्ध प्रशिक्षण’ गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले सुझाव दिएकाे बीबीसीले उल्लेख गरेकाे छ ।
गन्ध प्रशिक्षण प्रक्रियाअन्तर्गत महिनौँ लगाएर विभिन्न गन्धहरू सुँघ्न तथा मस्तिष्कलाई विभिन्न गन्ध थाहा पाउन एक किसिमले प्रशिक्षण दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको एक समूहले यस्तो प्रशिक्षण सहज र सस्तो हुने बताए।
स्टेरोइड वर्गको औषधिको प्रयोगमा जस्तो यसको कुनै अन्य खराब प्रभा`व पनि हुँदै`न। ज्वरो तथा खोकी`सहित गन्ध हराउनु पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको एक मुख्य लक्षण हो।
अधिकांश मानिसहरूमा कोभिड निको भएपछि चाँडै नै घ्राणशक्ति पनि फर्किन्छ। तर पाँच जनामध्ये झन्डै एक जनामा भने दुई महिना बितिसक्दा पनि गन्ध पूर्ण नफर्किएका विवरण आएका छन्।
यो समस्याको उपचा`रका निम्ति चिकित्स`कहरूले कोर्टिको`स्टेरोइड औषधि सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यसले शरीरमा सुजन कम गराउँछ। दमको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ।
तर यूनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्ग्लिया नरिच मेडिकल स्कूलका प्राध्यापक कार्ल फिल्पोट भन्छन्ः उपलब्ध प्रमाणहरू केलाउँदा कोर्टिकोस्टेरोइडको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन।
त्यसै`ले प्रति`ष्ठित जर्नल इन्टरन्या`श्नल फो`रम अफ एलर्जी एन्ड राइनोलजीमा विज्ञहरूले ‍औषधि प्रयोगको साटो ‘गन्ध प्रशिक्षण’को सुझाव दिएका छन्।
यसमा मानिसहरूलाई विशिष्ट गन्ध भएका र सजिलै पहिचान गर्न सकि`ने चार प्रका`रको गन्ध सुँघि`रहन सुझा`व दिइ`एको छ – उदाहरणका निम्ति सुन्तला, पुदिना, लसुन र कफी। कैयौँ महिनासम्म प्रत्येक दिन दुई पटक यी चिज सुँघ्न उनीहरूले सुझाएका छन्।
“यो उपचार न्युरोप्लास्टिसिटीमा आधारित छ – जसमा मस्तिष्कले कुनै परिव`र्तन वा क्षति`बाट पार पाउन आफू`लाई पुनर्सं`गठित गर्ने गर्दछ,” उनले भने।`
रुघाले कसरी मानव शरीरका कोषबाट कोभिड गराउ`ने विषा`णुलाई गलहत्याइदिन्छ रुघा लगाउने भाइरसले मानिसको शरीरका कोषहरूबाट कोरोनाभाइरसलाई गलहत्याइदिन सक्ने तथ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्। मानवको`षमा आफूले सङ्क्र`मण गर्ने प्रयासमा केही भाइरसहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।
यूनिभर्सिटी अफ ग्लास्गो`का वैज्ञानिकह`रूका अनु`सार रुघा लगाउने राइनोभाइरसले कोरोनाभाइरसलाई पराजित गरेको पाइएको छ। त्यसको लाभ छोटो समय`का लागि मात्र हुन सक्छ। तर राइनो`भाइरस धेरै फैलिएको हुनाले त्यसले कोभिडलाई दमन गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
तपाईँ आफ्ना नाक, घाँटी र फोक्सोका कोषहरूलाई लहरै बसेका घर भन्ठा`नूस्। ए`उटा भाइ`रस एकचो`टि भित्र छि`रेपछि त्यसले अरू भाइरसलाई भित्र `प्रवेश गर्न दिन या त ढोका खोलिदिन्छ या ढोका बन्द गरेर त्यहाँ आफू मात्र बस्न खोज्छ।
रुघाको कारक इन्फ्लूएन्जा भाइरस एकदमै स्वार्थी हुन्छ र त्यसले प्रायः एक्लै सङ्क्रमण गर्छ। एडिनोभा`इरसजस्ता अरू भाइर`सहरू अरूसँग मिलेर सङ्क्रमण गर्छन्।
कोभिड गराउने सार्स-कोभ-२ (Sars-CoV-2) नाम दिइएको कोरोनाभाइरसले अन्य भाइरससँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छ भन्नेबारे धेरै अनुमान गरिएको छ।तर एक वर्ष भौतिक दूरीका नियम`हरू लागु गरिएकाले सबै किसिमका भाइरस फैलिने क्रममा सुस्तता आएको छ। त्यसका कारण भाइरसको अन्तर्क्रियाबारे अध्ययन गर्न वैज्ञानिकहरूलाई अझ गाह्रो भएको छ।
ग्लास्गोस्थित सेन्टर फोर भाइरस रिसर्चको अनुसन्धान टोलीले मानिसको श्वासनलीको प्रतिकृति प्रयोग गरेर एउटा अध्ययन गर्‍यो। त्यसका लागि उस्तै खालका मानव`कोषहरू प्रयोग गरिए`को थियो। ती कोष`लाई सार्स-कोभ-२ भाइरस र राइनोभाइरसबाट सङ्क्र`मित पारियो।
एकैचोटि राइनोभाइरस र सार्स-कोभ-२ को संसर्ग गराइँदा कोषमा केवल रुघा लगाउने राइनोभाइरसले सङ्क्र`मण गर्न सक्यो। चौबीस घण्टाअगाडि नै राइनोभाइरस प्रवेश गरेको कोषमा कोरोनाभाइरसले प्रभाव पार्ने अवसर नै पाएन।
अनि यदि कोरोनाभाइरस २४ घण्टाअगाडि नै संसर्गमा आएको छ भने पनि राइनोभाइरसले त्यसलाई कोषबाट निकालिदिन्छ। “सार्स-कोभ-२ फैलिन सक्दैन, राइनो`भाइरसले यसलाई रोकि|दिन्छ,” डा. पाब्लो मर्सियाले बीबीसी न्यूजलाई बताए।
“यो एकदमै उत्साहप्रद छ किनभने राइनोभाइरसको आधिक्य छ भने त्य`सले सार्स-कोभ-२ को सङ्क्र`मण रो`क्न सक्छ,” उनले भने। पहिला पनि यस्ता` प्रभा`वहरू देखिए`का थिए। स`न् २००९ मा राइ`नोभाइरस फैलिन थालेपछि युरोपका केही भागमा स्वाइन फ्लू महामारीको गति सुस्त भएको थियो।
थप प्रयोग र परीक्षण गर्दा राइनोभाइरसबाट सङ्क्रमित कोषमा रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढेको र त्यसले कोरोनाभाइरसको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने क्षमता अ`वरुद्ध भए`को देखिएको छ। वैज्ञानिक`हरूले त्यस्तो प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्यलाई रोकेर हेर्दा कोभिड गराउने भाइरसको तह राइनोभाइरस नभएको अवस्थामा जस्तै बढेको पाए। तर रुघा निको भइसकेपछि तथा राइनोभाइरसको प्रतिरोधात्मक प्र`तिकार्य निस्तेज भइसकेपछि कोभिड हुने सम्भावना कायम रहन्छ।
“खोप, सरसफाइका उपाय अनि भाइरसहरूबीच हुने अन्तर्क्रियाले सार्स-कोभ-२ ठूलो मात्रामा घटाउन सक्छ। तर खोपबाट नै अधिकतम प्रभाव पर्छ,” डा. मर्सियाले भने।samachar kendra